Mepụta igwe eji eme ihe nke gi na Raspberry Pi | Akụrụngwa n'efu
Ọtụtụ n’ime anyị bụ ndị ọ na - abụ oge n’enweghị ike igwu egwu n’egwuregwu na egwuregwu nke anyị nwere obi ụtọ ibi na nwata. Eleghi anya na n'ihi nke a ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na anyị na-achọ, dị ka o kwere mee, ịmepụta igwe nke aka anyị nke ị ga-eme, n'otu ụzọ, ahụmahụ ndị ahụ gara aga.
N’iburu nke a n’uche wee wepụta igwe ọrụ ọkachamara, ihe dị mfe karịa ka ị nwere ike iche ebe ọ bụ na taa n’ahịa, ọtụtụ ngwa dị iche iche na-enye gị, ịkpọ ya n’ụzọ ụfọdụ, akụrụngwa ịmalite site na, keypads na ọbụna ntinye zuru oke maka ihuenyo na ngwaike, Taa, m ga-akọwara gị otu anyị chọrọ naanị Raspberry Pi nwere nhazi ahaziri iche iji nwee ike iji ya maka nzube a.
1 Kedu ihe anyị ga-enwe ike ịme egwuregwu kachasị amasị anyị?
2 Anyị na-ebudata ma wụnye RetroPie na Rasberi Pi anyị
3 Wụnye RetroPie na Raspberry Pi gị
4 Melite RetroPie na Raspberry Pi
Kedu ihe anyị ga-enwe ike ịme egwuregwu kachasị amasị anyị?
N'ụzọ dị oke mkpa ma nwee ike igwu egwu na ụdị ihuenyo ọ bụla, anyị ga-achọ ihe dị iche iche, site na nkwụsị, anyị ga-egosi otu esi aga n'ihu maka nrụnye ha. Ọ bụrụ n ’ị dị njikere ịtụgharị Rasbperry Pi gị ka ọ bụrụ ihe egwuregwu ochie, nke a bụ ihe ịchọrọ:
Njikọ ,ntanetị, nwere ike ịbụ site na LAN ma ọ bụ WiFi
Egwuregwu njikwa ihe egwuregwu
Dika ikwu okwu rue ugbua, ekwesiri ighota na, oburu na etinyechara ngwanro nile ma anyi puru ime ihe nile nke oma, anyi nwere ike bido iche echiche banyere imeputa ihe kariri ebe anyi gha acho ihe ndi ozo di ka ihe na-enye ihe onyonyo ndị ọkachamara karịa, n'ahịa ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ, ọbụnakwa kwadebe ya na igodo ya, ihuenyo ...
Hazie gị Pi Pi dị ka sava weebụ
Anyị na-ebudata ma wụnye RetroPie na Rasberi Pi anyị
Iji mezuo ebumnuche ahụ kachasị nke inwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu anyị na ihuenyo ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị mechara nwee obi ike na arcade anyị, ikekwe nzọ kachasị amasị bụ wụnye RetroPie sistemụ arụmọrụ na Rasberi Pi. Ihe anyị na-ekwu bụ banyere ụdị nke Raspbian ebe, na ndabara, enwere ahaziri ahazi nke ọma nke na-enye anyị ohere ịmalite ndị emulators dị iche iche iji jupụta egwuregwu anyị.
RetroPie dị iche na nhọrọ ndị ọzọ dị n'ahịa n'ihi nhazi ya dị iche iche, ntụgharị nke interface ya na ojiji nke ndị na-emeghe emulators, ihe n'ikpeazụ na-eme Onye ọ bụla nwere mmasị na-emepe emepe nwere ike ịmekọrịta na mmalite nke sọftụwia a yana koodu ọhụụ yana site na ịkọ akụkọ na ịdozi njehie enwere ike achọpụta. nke a ga-emezi na obere oge site n'aka ndị obodo.
N'oge a, anyị ga-ewere ihe dị ezigbo mkpa na nke ahụ bụ na, ọ bụ ezie na RetroPie na-enye gị ohere i toomi ihe nkasi obi dị iche iche, eziokwu bụ na dabere na Raspberry Pi ejiri anyị nwere ike igwu egwuregwu ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ. Otu ihe atụ doro anya bụ na ọ bụrụ na anyị arara Raspberry Pi 1 na nke a, anyị agaghị enwe ike igwu nhọrọ dịka Play Station 1 ma ọ bụ Nintendo 64, nhọrọ abụọ maka opekata mpe, anyị chọrọ nhọrọ dị ike karị dịka Raspberry Pi 2 ma ọ bụ 3. Nke a bụ ndepụta nke consoles na i nwere ike i emomi na a software:
Egwuregwu Nwa nwoke na-aga n'ihu
Nintendo Ntụrụndụ Ntụrụndụ
Super Nintendo Ntụrụndụ System
Usoro Sega Master
Sega Mega Drive / Jenesis
Na mmechi, ekwesiri ighota na RetroPie, ekele diri obodo buru ibu nke ndi mmepe n’azu oru a, bu ta dakọtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị njikwa na-enweghị mkpa ịwụnye sọftụwia ọzọ. Anyị nwere ihe atụ nke ndị njikwa dakọtara na nke anyị nwere ike iji njikwa Play Station 3 ma ọ bụ Xbox 360.
Wụnye RetroPie na Raspberry Pi gị
Ozugbo anyị mechara ngwaike niile, oge eruola ịmalite ịwụnye RetroPie na Rasberi Pi. N'oge a enwere nhọrọ abụọ dị iche iche dị iche iche anyị nwere ike ịhọrọ na nke ahụ na-enye anyị otu nsonaazụ ikpeazụ.
Nke mbu anyi nwere ike wụnye emulator site na iji ihe oyiyi RetroPie na OS ndị Raspbian gụnyere. Onwe m, echere m na nke a bụ ụzọ kachasị mfe ebe ọ bụ naanị na anyị ga-ebudata onyonyo nke RetroPie na webụsaịtị gọọmentị nke ọrụ ahụ. Ihe na-adịghị mma bụ na, n'ụzọ dị otú a, nrụnye ga-ehichapụ ọdịnaya niile nke kaadị microSD anyị na-eji.
Nhọrọ nke abuo ga agabiga jiri ohere ochie Raspbian mee ihe na ị nwere ike tinyeworị na Rasberi Pi. On a image anyị ga-nanị wụnye RetroPie emulator. N’ụzọ dị mfe a, anyị anaghị efufu faịlụ ọ bụla nke anyị nwere ike ịhazigharịrị na diski ma ọ bụ kaadị microSD anyị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ mbụ a, gwa onwe gị na, ibudata ihe oyiyi RetroPie, ị ga-enyerịrị menu nbudata nke dị na webụsaịtị ngo ahụ. Ozugbo windo windo dị, anyị ga-ahọrọ ụdị nke Rasberi Pi wee pịa na nbudata. Ihe oru ngo a di oke nma ya na nbudata onyonyo a nwere ike iwe ogologo oge, maka ijiko oso oso o gha ewe ihe dika nkeji ise.
N'oge a, anyị ga-ebufe ọdịnaya nke onyonyo RetroPie na kaadị microSD anyị. Maka nke a, mee ihe a Mụ onwe m na-eji ngwanrọ Etcher dịka ọ dị mfe karịa ịgbakwunye ihe oyiyi na kaadị ahụ site na iji akara iwu ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ dị elu, n'ezie, ị na-achịkwa nke ọ bụla n'ime nhọrọ abụọ ahụ nke ọma. Isi ihe a na usoro, otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-ewekarị 10 nkeji. Ozugbo emere usoro a, naanị anyị ga - ejikọ Rasberi Pi anyị iji nwalee na arụnyela nrụpụta ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ na ị tinyeworị ntinye Raspbian na Raspberry Pi gị, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịwụnye emulator RetroPie na ya. Iji mee nke a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịwụnye ngwugwu git. A na-arụnyere ngwungwu a na ndabara mana, ọ bụrụ na anyị enweghị ya, anyị ga-abanye iwu ndị a.
Ozugbo etinyechara nchịkọta niile ma melite, anyị ga-abanye iwu ndị a ga - etinye emulator na ụdị nke Raspbian anyị.
Mgbe anyị gwụchara ntuziaka ikpeazụ anyị ga-ahụ onyonyo yitere nnọọ nke m hapụrụ gị n'okpuru usoro ndị a. N'ime ya, dịka ị pụrụ ịhụ, naanị anyị ga-egosi na etinyere ntọala bụ isi. Usoro a nwere ike were ọtụtụ nkeji. Ozugbo emechara nwụnye, anyị ga-amalitegharị sistemụ arụmọrụ.
Melite RetroPie na Raspberry Pi
N'oge a anyị enweela ike ịwụnye emulator, na nke ọ bụla n'ime ụzọ abụọ ahụ, anyị ga-aga n'ihu ịhazi ụfọdụ ngwaọrụ ga-enyere anyị aka imeziwanye ahụmịhe onye ọrụ anyị yana njikwa iji nwee ike igwu egwu.
Ngwaọrụ mbụ anyị kwesịrị ịhazi bụ Samba. Sọftụwia a ga - abụ nke mgbe oge ruru, ga - eme ka anyị jikọọ Rasberi Pi site na kọmpụta ọzọ iji gbakwunye egwuregwu. Iji mezuo ọrụ a, anyị ga-enweta naanị RetroPie Mbido. Nke ọzọ window, dị nnọọ pịa nhọrọ hazi Samba ROM mbak
Usoro a nwere ike iwe nkeji ole na ole mana, ozugbo ịmechara, Anyị nwere ike ịnweta Rasberi Pi anyị na PC ọ bụla jikọọ na otu netwọk ahụ. Maka nke a, na folda ọ bụla, na adreesị adreesị, anyị na-ede IP nke Raspberry Pi anyị, ọ bụrụ na anyị maara ya, ma ọ bụ iwu ahụ // RASPBERRYPI.
N'oge a, n'ikpeazụ, anyị nwere RetroPie emulator ahazi na motherboard anyị na, nke kachasị mkpa, ịnweta ya site na PC ọzọ. Ugbu a naanị ihe anyị ga-eme bụ ịchọ ntanetị maka ebe anyị nwere ike ibudata egwuregwu anyị chọrọ ịwụnye.
Ozugbo anyị nwere egwuregwu anyị chọrọ ịwụnye maka ụfọdụ njikwa egwuregwu, anyị nweta site na Samba na nchekwa nke kwuru egwuregwu njikwa ma gbakwunye egwuregwu ahụ. Ozugbo etinyere egwuregwu ahụ na folda kwekọrọ, anyị ga-amalitegharịrị anyị Rasberi Pi maka ya iji chọpụta ya wee nwee ike ịmalite ịkpọ egwu.
Dịka nkọwa ikpeazụ, gwa gị na ọ bụrụ na anyị ejiri otu ụdị nke RetroPie kachasị ọhụrụ yana nchekwa zuru oke, anyị agaghị awụnye njikwa ebe sistemụ arụmọrụ enweworị ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa maka njikwa ahụ ịchọpụta ha. Anyị kwesịrị ijikọ ha ma regharịa mbadamba. Isi ihe ọzọ ị ga-echeta, bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu n'ụzọ dị ukwuu karị, gaa ilegharị anya motherboard. Maka nke a, anyị na-abanye menu menu raspi-config. Iji mepụta na nhazi a, kpamkpam nhọrọ, anyị ga-ede na Terminal:
Ozugbo emere iwu a, windo kwesịrị ịpụta ebe anyị ga-ahọrọ nhọrọ 'overclock'na, na nke ọhụrụ a, nhọrọ Ọkara 900 MHz.
Dịka m kwuru, nhazi ikpeazụ a bụ nhọrọ zuru oke ma ị ga-eburu n'uche ọtụtụ ihe ebe ọ bụ, dịka interface ga-aga karịa mmiri, anyị na-amanye ihe nhazi ahụ ka ọ ga-akawanye ọkụ, ihe nwere ike ime ka ọ kwụsị ịgbaze ma ọ bụrụ na anyị ejighị ụlọ ihe ọkụ nke nwere ike wedata ọnọdụ ya nke onye ofufe na-akwado.
Ozi ndi ozo: mmemme
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Mepụta igwe eji eme ihe nke gi na Raspberry Pi